I-WordPress: Ungawabhala Kanjani Amakhasi Ezingane (I-Plugin Yami Entsha) | Martech Zone
I-WordPress: Ungawabhala Kanjani Amakhasi Ezingane (I-Plugin Yami Entsha)
ULwesihlanu, July 13, 2018 ULwesihlanu, July 13, 2018 Douglas Karr
Siphinde sakha isikhundla sokuphatha amasayithi samakhasimende ethu amaningi we-WordPress, futhi enye yezinto esizama ukuzenza ukuhlela imininingwane kahle. Ukwenza lokhu, imvamisa sifuna ukudala ikhasi eliyinhloko futhi sifake imenyu ebala ngokuzenzakalela wonke amakhasi angezansi kwayo. Uhlu lwamakhasi ezingane, noma amakhasi amancane. Ngeshwa, awukho umsebenzi wemvelo noma isici sokwenza lokhu ngaphakathi kwe-WordPress, ngakho-ke sithuthukise ifayela le- I-WordPress List Subpages shortcode ukwengeza kufayela le-theme.php yetimu yamakhasimende.
Ukusetshenziswa kulula kakhulu:
Awekho amakhasi ezingane
ekilasini - Uma ungathanda ukufaka isigaba kuhlu lwakho olungabhalisiwe, mane ulifake lapha.
ifempty - Uma engekho amakhasi ezingane, ungafaka umbhalo. Lokhu kuyasiza uma kunguhla lwemisebenzi evulekile… ungafaka okuthi “Akukho ukuvuleka kwamanje.”
sokuqukethwe - Lokhu okuqukethwe okuboniswa ngaphambi kohlu olunga-odiwe.
Ngokwengeziwe, uma ungathanda i- ngcaphuno emfushane ichaza ikhasi ngalinye, i-plugin inika amandla izingcaphuno emakhasini ukuze ukwazi ukuhlela lokho okuqukethwe kuzilungiselelo zekhasi.
Ekugcineni ngifike ngacindezela ikhodi ku-plugin ukwenza kube lula ukuyifaka nokuyisebenzisa, kanye ne Faka kuhlu i-plugin yamakhodi ezinwele zezingane ivunyelwe yi-WordPress namuhla! Uyacelwa ukuthi uyilande bese uyifaka - uma uyithanda nikeza isibuyekezo!
Tags: uhlu lwamakhasi ezinganeuhlu oluncaneXhumaikhodi emfushaneWordPressplugin wordpress
I-FindThatLead Prospector: Sesha futhi Thola Amakheli E-imeyili Aholayo Aqondisiwe
Umbiko weBellTALK Benchmark: Imikhuba Emihle Yokukhuthaza I-Webinar Yakho